Cunto: Talooyin ku saabsan sida looga hortago Spam Comment in WordPress
Ka foojignaantaada dhagaystayaasha iyo kor u qaadista hawlaha isticmaalka ayaa ahmiyad gaar ah leh marka ay timaado suuq geynta. Muhiimadda qaybta faallooyinka ee boggaaga internetka lagama dhigi karo. Qaybta faallooyinka, waxaad si deg deg ah u bilaabi kartaa wadahadaladda internetka oo falanqaynta jawaab celinta macaamiisha waqtiga dhabta ah
Andrew Dyhan, oo ah khabiir hormuud u ah Semt , wuxuu ka dhigayaa waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato Askimet.
Kadib markaad WordPress ku dhejiso boggaga internetka, macaamiisha waxay helayaan Askimet mid ka mid ah sifooyinka caadiga ah. Qaar badan oo ka mid ah la-taliyayaasha suuq-geynta ayaa ku rakibay WordPress laakiin waxay ku fashilmeen inay firfircoonaadaan muuqaalka Askimet - kia harrisburg. Ka horjoogsiga iyo ka hortagga xayeysiinta (spambots) waa hawl qabasho oo aad si dhakhso ah u fulin karto miiskaaga maxaliga ah
Ka waramida faallo faallo ah oo ku saabsan boggaaga internetka ma aha mid xiiso leh. Askimet waxaa soo saaray oo ay naqshadeeyeen aasaasayaasha WordPress. Askimet wuxuu ka caawiyaa la-taliyayaasha suuq-geynta inay calaamadeeyaan oo ay aqoonsadaan faallooyinka. Ka dib markii la tilmaamayo iyo aqoonsashada spamka faallada, adeegga shabakadda Askimet ayaa faallo ka bixiya faallooyinka iyaga oo ka wakiil ah suuqyada. Ka feker sidii aad u heli lahayd furahaaga Barnaamijka Interface Interface (API) falanqaynta faallooyinkaaga asbuuc walba.
Shinaalka Antispam waa mid ka mid ah miisaanka ugu sarreeya ee ka caawinaya in looga hortago faallooyinka spam ee WordPress. Ka dib markii ay dhaqaajinayaan shinbiraha Antispam, ma jiraan wax saxeex ah oo loo baahan yahay. Shinaalka Antispam wuxuu isticmaalaa xogta anti-spam si loo falanqeeyo faallooyinka. Shinbiraha Antispam ayaa sidoo kale waxay hubiyaan inta u dhaxeysa martida martida ah. Haddii macaamil macquul ah uu soo bandhigo faallo isla markiiba ka dib markii boostada la soo dhajiyay, shinnida Antispam waxay la socotaa marwalba sida faallooyinka WordPress..
Sidoo kale loo yaqaan Google Captcha, ReCaptcha waxay ka caawisaa suuqgaynta inay Captcha ku galaan ereyada sirta ah, faallooyinka iyo waraaqaha diiwaangelinta. Google Captcha waxay ubaahan tahay dadka isticmaala dhamaadka si ay u xaqiijiyaan aqoonsiyada kahor intaanay geli karin bog internet. Tani waxay ahayd mid ka mid ah xalka ugu fiican ee ay isticmaalaan suuqyadu si ay uga hortagaan ugana hortagaan spam WordPress.
Ka feker inaad rakibto oo aad dhaqaajiso plugin si aad u sii socoto. Aqoonsiga foomka si aad u hesho natiijooyin faa'iido leh. Si aad u tijaabiso in faallo ka bixinayso boggaaga WordPress, ku qor oo isku day inaad soo gudbiso faallo.
Dib u jajabinta trackbacks ee aad WordPress
Sannado yar ka hor, dib-u-celin ayaa si caadi ah loo adeegsaday suuq-gareenta iyo bloggers si ay ula xiriiraan. Maalmahan, spammers ayaa isticmaalaya trackbacks si ay spam post on bogagga WordPress. Si aad ula macaamilato noocyada noocaas ah ee spam, waxaad tixgelisaa inaad joojinayso raadraaca boggaaga.
Si aad u joojiso trackbacks ku saabsan boggaaga WordPress, gal koontada 'Settings' oo guji 'Doorka Doodda'. Riix xulashada hoosta 'trackbacks and pingbacks' si aad u joojiso xayiraado iyo trackbacks oo ka socda orodka goobtaada. Spam WordPress ayaa sidoo kale la naafo karaa nambarka boostada. Riix 'tabaha doodaha' si aad u joojiso xakabaynta boggaga gaarka ah.
Ka saar xiriirka Nofollow ee faallooyinka
Haddii aad isticmaashay xiriir aanad raacsanayn faallooyinkaaga, tixgelin ka qaad iyaga. Xaaladaha intooda badan, dadka websaydhiyaadka iyo suuqgeydu waxay ku dhamaanayaan in ay ciqaabayaan Google sababtoo ah soo iibinta tayada hoose iyo faallooyinka Spammy.
Ku dhajinta faallooyinka ku yaala boostadaadii hore
Spam WordPress wuxuu noqon karaa mid aad u dhib badan. Haddii aad haysatid falanqaynta faallooyinka hore ee ku yaal boggaaga, tixgeli faallooyinka faallooyinka ah ee ku yaal boggaga hore. Fur 'Settings' oo guji 'Dood-wadaag' hoosta cinwaankaaga boggaga faallooyinka si aad uhesho faallooyin ku saabsan waxyaabaha la soo dhajiyay sannado badan kahor.
Sannadihii ugu danbeeyay, spam WordPress ayaa walaac weyn ka qabay websaydhada iyo bloggers. Ha u oggolaan in faafinta faallooyinka ay jabiso ololehaaga internetka. Isticmaal WordPress 'isbedelka iyo ekaaqyada si looga hortago falanqaynta faallooyinka boggaaga.